Waa maxay bloatware iyo sida looga saaro Android | Androidsis
Waa maxay bloatware iyo sida looga saaro Android
Ignacio Sala | | Tababarada
In kasta oo waqtigan la joogo ay jiraan hawlwadeenno badan oo joojiyey kabista ay ku shaqeeyaan teleefannada gacanta, haddana waxaan wali ka heli karnaa kiisas badan, kuwaas oo ay ku jiraan lagu xardhay barnaamijyo horay loo rakibay in aan si fudud uga saari karin qalabkeena adoo raacaya nidaamka caadiga ah.
Codsiyadaani waxay noqdeen a ku badan nidaamyada hawlgalka, laga bilaabo Android illaa Windows, iyada oo loo marayo Linux, macOS iyo xitaa iOS, halkaas oo Apple ay soo bandhigto codsiyo taxane ah oo aan cidina isticmaalin. Codsiyadaas waxaa loo yaqaan 'bloatware'.
1 Waa maxay bloatware
2 Sida looga saaro qalabka kombuyuutarka ee Android
2.1 Bar-dhig barnaamijka
2.2 Adoo adeegsanaya qalabka ADB ee Google
2.2.1 Daar ikhtiyaarrada horumariyaha
2.2.2 Awoodda Muuqaalka USB Debugging
2.2.3 Tirtir barnaamijyada Google ADB
2.3 Iyada oo ADB App Control
2.3.1 Daar ikhtiyaarrada horumariyaha
2.3.2 Awoodda Muuqaalka USB Debugging
2.3.3 Kala soo bax barnaamijka ADB App Control
Waa maxay bloatware
Bloatware, oo loo tarjumay sida bloatware, waa qaybo codsiyo ah oo si asaasi ah u yimid horayna loogu rakibay nidaamka qalliinka iyo halkaas oo aan si fiican ugu dari lahayn Chrome, biraawsarka Google ee horay loogu sii rakibo dhammaan taleefannada casriga ah ee suuqa la yimaada Google ee Android.
Maaddaama aan u tixgelin karno Chrome-ka inuu yahay bloatware, magacan waxaa badanaa loo isticmaalaa kan barnaamijyada saddexaad ee aan ka iman Google waana lagu rakibi karaa terminal kasta sababo la xiriira heshiisyada dhaqaale ee soo saaruhu gaareen, sida Facebook, Instagram, Flipboard, iyo sidoo kale codsiyo kale oo gebi ahaanba aan waxtar lahayn iyo ciyaaro aynaan ugu talagalin nolosha.
Codsiyadaani waxay salka ku hayaan nidaamka qalliinka, sidaas ma tirtiri karno (inta badan kiisaska) sida inaan tirtiri karno codsi kasta oo aan kala soo baxno Dukaanka Play. Nasiib wanaagse, waxaa jira habab dhowr ah oo noo oggolaanaya inaan ka takhalusno barnaamijyadan si ay muuqaal ahaan u baaba'aan (maaddaama haddii aan qalabka ka soo celinno xoqida, barnaamijyadan ayaa mar kale la heli doonaa).
Sida looga saaro qalabka kombuyuutarka ee Android
Waqtiga ka saar bloatware Taleefanka casriga ah ee 'Android', waxaan ku haynaa 3 xulasho, midkoodna lagama maarmaan inay tahay in rukhsad rujin laga helo aaladda, in kastoo ay u baahan yihiin tallaabooyin taxane ah, tallaabooyin noqon kara xoogaa adag haddii aadan haysan kombiyuutar badan aqoon.
Tani waa howsha fudud marka la saarayo codsiyada, halkii laga qarin lahaa maadaama ay raadad ku reebayso qaab toobiye oo nagu martiqaadaya inaan mar kale rakibno arjiga.
Si loo qariyo / loo joojiyo codsiyada ku jira Android, waa inaan marin u helnaa dejinta aaladahayaga, gaar ahaan liiska Aplicaciones oo dooro arjiga aan dooneyno inaan qarinno / deminay. Xulashada kala duwan ee la muujiyay, waxaan ka xulannaa xulashada Hawl gab.
Haddii badhanka Disable-ka la cawdo, laguma heli karo ikhtiyaar ahaan, sidaas darteed ikhtiyaarka kaliya ee looga takhalusi karo iyada Waa iyada oo loo marayo labada ikhtiyaar ee aan hoosta kuugu tusinayo.
Codsiyada kale tus xulashada Uninstall halkii aad ka Dami lahayd. Kuwani waa codsiyo aan ku rakibnay terminaalka, maahan barnaamijyo si asaasi ah loogu rakibay aaladda oo ku dhaca qaybta bloatware.
Adoo adeegsanaya qalabka ADB ee Google
Google ADB waa aaladda loogu talagalay horumariyeyaasha ay Google u diyaariso dhammaan kuwa doonaya inay abuuraan ciyaaro ama barnaamijyo loogu talagalay Android. Codsigan wuxuu ku shaqeeyaa amarrada terminal, amarada aan awoodno ka tirtir codsiyada aaladdayada.
Laakiin marka hore, waa inaan marka hore dhaqaajino xulashooyinka soo-saareyaasha ka dibna aan kicino habka khaladka USB-ka.
Daar ikhtiyaarrada horumariyaha
Midka ugu horreeya uguna muhiimsan waa dhaqaajiso xulashooyinka horumariyaha kahor. Si tan loo sameeyo, waa inaan si isdaba joog ah ugu cadaadinaa menu-ka Tirada Isku-darka ee laga helay qaybta macluumaadka Telefoonka.
Awoodda Muuqaalka USB Debugging
Habka khaladka USB-ka ayaa la heli karaa marka aan dhaqaajino qaabka soo-saaraha. Gudaha liiskaas, qaybta Debugging, waa inaanu kicinaa ikhtiyaarka USB debugging.
Tirtir barnaamijyada Google ADB
Markaanu dhammaystirno labadii tallaabo ee hore, waa inaan kala soo baxno codsiga Google ADB adigoo gujinaya xiriiriye soo socda. Codsigan waxaa loo heli karaa labadaba Windows, sida macOS iyo Linux.
Marka aan soo dejino faylka, waxaan ka furaynaa daaqad amar ah isla tusaha halkaas oo aan ka furfurnay faylkii aan soo dejinay, oo ah halka laga rabo in laga helo codsiyada lagama maarmaanka u ah in ay awood u yeeshaan marin-u-helkeenna Android.
Liiska codsiyada lagu rakibay casriga casriga ah ee 'Android'
Marka xigta, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan aqoonsanno magaca dalabka aan dooneyno inaan ka saarno aaladdayada. Si tan loo sameeyo, waxaan ku qoreynaa qadka amarka
baakadaha liiska adb shell pm
Marka xigta, liis ayaa lagu soo bandhigi doonaa magacyada dhammaan codsiyada la rakibay.
Marka aan aqoonsanno magaca dalabka aan dooneyno inaan ka saarno aaladdayada, waxaan ku qoreynaa qadka amarka
adb shell pm uninstall -k –user 0 xirmo-magac
0 waa eber iyo gudaha xirmo-magac, waa inaan qornaa arjiga si aan u tirtirno, kaasoo kiiskan uu yahay flipboard.boxer.app.
Iyada oo ADB App Control
Ikhtiyaar fudud, oo kaliya loo heli karo Windows, waa in la isticmaalo barnaamijka ADB App Control, oo ah codsi beddel interface interface ee ay bixiso Google ADB mid ka mid ah daaqadaha, taas oo noo ogolaaneysa inaan doorano barnaamijyada aan dooneyno inaan ka saarno qalabkeena.
Sida codsiga Google ADB, waa lagama maarmaan horay-u-sii-karti xulashooyinka horumariyaha (adoo gujinaya dhowr jeer lambarka dhismaha nooca shirkadeena).
Habka khaladka USB-ka ayaa la heli karaa xulashooyinka horumariyaha, qaasatan qaybta ka saarida. Si aan u dhaqaajino, waa inaan u wareejino badhanka midigta si ay ugu muuqato midab buluug ah.
Kala soo bax barnaamijka ADB App Control
Marka xigta, waxaan soo dejisanaa arjiga Xakamaynta ADB App. Codsigan waxaa kaliya loo heli karaa Windows, markaa haddii aad haysato Mac ama kombiyuutar ay maamusho Linux waa inaad caawimaad weydiisataa qof aad taqaan.
Codsiga wuxuu ku yaal loo turjumay isbaanish, sidaa darteed wax dhibaato ah nagama soo gaari doonto inaan si dhakhso leh u fahamno hawlgalkeeda. Markaanu rakibno arjiga (hawshu waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan uga takhalusno codsiyada horay loo sii rakibay waa in la doorto mid kasta oo ka mid ah. Kadib, geeska midig ee hoose ee arjiga waxaan dooranay Koronto.
Marka xigta, fariin digniin ah ayaa la soo bandhigi doonaa iyadoo lagu wargalin doono aaladda laga yaabo inay shaqada joojiso haddii aan ka saarno wixii codsi ah ee nidaamka u baahan.
Marka xigta, waxay na weydiin doontaa haddii aan rabno codsiyada gurmad in aan tirtireyno, haddii aan rabno inaan dib u rakibno haddii qalabka uu shaqada joojiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Waa maxay bloatware iyo sida looga saaro Android
Cubot ID206, smartwatch cusub oo wata Alexa iyo ismaamul dhan 18 maalmood oo kayar 33 euro
Sidee loo hagaajiyaa koodhka qaladka 910 ee Dukaanka Play